အလှူသွားခဲ့တာ ဘယ်ရွာသူ ၊ ဘယ်ရွာသားတွေပါလိမ့် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » အလှူသွားခဲ့တာ ဘယ်ရွာသူ ၊ ဘယ်ရွာသားတွေပါလိမ့်
အလှူသွားခဲ့တာ ဘယ်ရွာသူ ၊ ဘယ်ရွာသားတွေပါလိမ့်
Posted by etone on May 2, 2012 in My Dear Diary, Photography, Travel | 108 comments
etone ဘ၀ တစိတ္တပိုင္း ဖြတာမဟုတ္ဘူး ျပတာပါ
ရွာသူရွာသားတို့ ရေ … အလှူလုပ်ရင်း အမှတ်တရ သွားခဲ့တဲ့ရိုက်ခဲ့တာလေးတွေကို မုဒိတာပွားရအောင် ၊ မလိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သူတွေရယ် ၊ စာဖတ်သူတွေရယ်အတွက် .. နည်းနည်း ပြလိုက်မယ်နော် … ။ မှားတာ ရှိလျှင် ဝန္ဒာမိပါချင့် …. ။ ဟိဟိ … ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေလည်း ရှိပါသေးကြောင်း ….
(၁) ဒီတစ်ယောက်က ဘယ်သူများပါလိမ့် …. မျက်နှာခြောက်ဘက်ရှိတဲ့ ရွာသားလေးပါ … နာမည်သိလျှင် ပြောကြပါဦး …
(၃) ဒီရွာသားကြီးကတော့ တစ်ချိန်လုံး ပြုံးနေပါတယ် …. သူ့ကိုမြင်ပြီး အညာတောမှာ ပျော်တယ်ဆိုတဲ့ မောင်ရေ မောင်ရေ ဆိုတဲ့သီချင်းလေးကို တီးတိုးညည်းမိပါတယ် …ဘယ်သူများပါလိမ့်နော် …
(၅) ဒီရွာသားကြီးကတော့ စနက်ရှော့မဟုတ်တဲ့ လက်ဆော့ပါတဲ့ …. ရွာထဲက နာမည်ကြီး ဓါတ်ပုံဆရာများထဲက တစ်ယောက်ပါ ။ အလှူအတွက်ကို မန္တလေးကနေတောင်လာရတာပါ ။ ဘယ်သူများပါလိမ့်နော် ။
(၇) ဒီရွာသား သူက အကြံကြီးတယ် … သူ့သားလေးကိုတောင် နောင်ရေး စိတ်အေးရအောင် သူရဲ့ပွိုင့်တွေ လွှဲပေးခဲ့ဦးမတဲ့ … သူရေးတဲ့ ပို့စ်လေးထဲက တောက်စ်စ်စ်စ်စ် သံလေးကိုတော့.. လူတိုင်းအမှတ်ရကြမှာပါနော် ။ သူဘယ်သူပါလိမ့် … ။
(၉) ရွာထဲက ဓါတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်ပါပဲ …. ။ သူငှက်ပျောသီးစားနေတာ သဘောကျလို့ ရိုက်ထားတာပါ ။ အပျော်ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးပါ ။ စာဖတ်သူတွေကိုလည်း စားပါဦးတဲ့ …. ကျွေးနေသေးတယ် … ဘယ်သူများပါလိမ့်နော်
(၁၁) လွှတ်တော်မတတ်တဲ့ ရွာထဲက အမတ်တစ်ယောက်ပါ … ။ ဘယ်သူများပါလိမ့် …
(၁၂) အုပ်ထိန်းသူကို ထားပြီး ဘော်ဒီဂတ်နဲ့ လမ်းလျှောက်ထွက်တာ ဘယ်သူပါလိမ့် … ဒေါ်လှကြည် နဲ့ သူ့ကလေးတစ်သိုက်နဲ့ ရိုက်တဲ့ပုံလည်း တခြားသူတွေဆီမှာ ရှိပါသေးတယ် .. ပွဲတောင်းလျှင် တင်ပေးပါမတဲ့ .. ဟိဟိ
(၁၃) ပန်းတနော်သား ရွာသားကြီးပါ ….. ။ ဘယ်သူများပါလိမ့်နော် … သီချင်းရဲ့ ဟမ်းဆက် ကံစမ်းမဲပေါက်တဲ့ လူပါ … ။
(၁၅) သူက ဘယ်သူပါလိမ့်နော် ။ သူနာမည်ခေါ်လို့ ထူးလျှင် အဓိပ္ပါယ်တစ်မျိုးထွက်တယ်ဆိုတော့ သတိထားထူးကြနော် …. ရွာရဲ့ ဇရပ်ပိုင်ရှင်ပါ … ဂရုချက်ကိုထောင်ပေးခဲ့သူလို့ သိရပါတယ် သူ့လိုနာမည်တူရှိနေတော့ သူက အမှတ်၂ ပါတဲ့
(၁၇) ကျိုက်ထီးရိုးလေး ဘုရားပေါ်ကို နေအရမ်းပူလို့ မတတ်ဘူး ပြောပြီး တက်မယ့်တက်တော့ ထိပ်ဆုံးရောက်အောင် တက်သွားတဲ့ ရွာသားက ဘယ်သူများပါလိမ့်နော ်။
(၁၉) ဒါကရော ဘယ်သူလေးလဲ သိကြလား ။ ပြည်တွင်းရုပ်သံလိုင်းက ကအစီစဉ်ကြေငြာသူတွေထက်တောင် အပြုံးချိုချိုနဲ့ အပြောဆိုပြေပြစ်သေးတယ် ။ ဒီရွာသူက .. သူ့ရဲ့ ညီမ အငယ်ဆုံးနဲ့ အလှူကို လာခဲ့တာပါတဲ့ … ဟီး ။
(၂၁) ပန်းနာမည်လေးနဲ့ သူလေးကရော ဘယ်သူလေးလဲ … လက်လေးနှစ်ချောင်းထောင်လို့ …. (ကိုဖက်ကတ်တို့ မမြင်စေနဲ့နော် … သူတို့က လက်နှစ်ချောင်ထောင်လျှင် ဘာတဲ့ ဆိုလားပဲ .. ဟိဟိ ဖွပြီ )
(၂၃) မိသားစုသံယောဇဉ်လေး ခိုင်မာစွာ အမျှင်တန်းဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ရွာသူလေးပါ …. ။ တပင်ထဲ ရင်ထဲက ဘယ်သူပါလိမ့်နော် …
(၂၅) နေရောင်ထဲက စာခြောက်ရုပ်လုပ်နေတဲ့တာ .. ဘယ်သူများပါလိမ့်နော် … လက်နှစ်ချောင်းတောင် ကောင်းကောင်း မထောင်ရဲဘူး … ကိုဖက်ကတ်တို့ကိုကြောက်လို့ ….
(၂၇) အပြုံးချိုချိုနဲ့ ရွာသူလေးက ဘယ်သူများပါလိမ့် … သူလည်း သူ့ field မှာ နာမည်ကြီးစလက်ဘရက်တီနော် …
(၂၉) easy cook ရဲ့ ပင်တိုင် စားဖိုမှုးရွာသူတစ်ယောက်ပါ … ဘယ်သူများလဲ မသိဘူးနော် ။
(၃၁)အလှူ အပြီး ကြည်နူးနေတဲ့ …. ဒီအတွဲက ဘယ်သူတွေပါလိမ့်နော် …. ။
(၃၃) ဒါကတော့ ကိုယ့်ရပ်ကိုယ့်ရွာကို အလည်ခေါ်ရင်း … အလှူပြီးမြောက်အောင်မြင်တဲ့ခါ ဦးဆောင်သူရဲ့ ပီတိပုံပါပဲ … ရှားရှားပါးပါး .. ဒီတစ်ပုံထဲရယ် … ။
( ဓါတ်ပုံတွေ တင်လိုက်တာ… လူသိမခံရဲပဲ လူလုံးထွက်ပြသူတစ်ချိုက သဂျီးဆီ တိုက်ရိုက်ကွန်ပလိမ်းတက်တယ်လို့ သိရပါတယ် …ဒါကြောင့် သဂျီးက သူတို့ပုံတွေကို ဖျက်လိုက်ပါတယ် ။
သူတို ့ပုံကိုဖျက်လိုက်လျှင် ကျန်တဲ့ လူတွေပုံဆက်တင်ထားတာလည်း မတရားဘူးထင်လို့…. ကျွန်မကပုံအားလုံးကို ဖျက်ပေးလိုက်ပါတယ် …. ကော့မန့်တွေကိုတော့ အမှတ်တရအနေနဲ့ သိမ်းထားပါမယ်နော် …. )
တကယ်ပြောရရင်သူက ကိုရီးယားကားထဲကလိုဂျောပိုးပြီးခေါ်သွားရမယ့်လူက အလူှထဲမှာ ဓါတ်ပုံတွေရိုက်တယ်လေ…………………………….
ဓါတ်ပုံတွေ မြင်ရတာ အားရစရာကြီးဗျာ… ၊
ရွာသူားတွေ က ကျားကကျုားလိုခန့်
မ က မလို ချောကြပါပေတယ် …။
အဲ လုပ်လိုက်ပီ ..:P
မင်းသမီးလေး အိတုံ အလှဆုံးပါချင့် …
အဟီး ဟီး … ရှက်ထှာအေ … သွားရည်တောင် ကျလာပြီ …. ပဲများ လွန်သွားတာ … ဘယ်နားကြည့်ကြည့် ၊ ဘယ်လိုကြည့်ကြည့် ဘာပုံမှ မထွက်တဲ့ပုံကို .. လှဒယ်ဆိုတော့လည်း … ဘယ်လိုပြောရမလဲ … အဟဲ …. ပျော်ထှာပေါ့ .. ဟိဟိ
ရွာသူားတွေရဲ့ ပုံတွေ တွေ့ခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးပါ။ အောက်က အဖြေတွေ ကြည့် လိုက် အပေါ်က ပုံတွေ ပြန်ကြည့် လိုက်နဲ့ ခေါင်းတော့ နည်းနည်း မူးသွားတယ်။ etone အပါဝင် တချို့ ကိုတော့ ဟိုတခေါက် အလှု ထဲက တွေ့ ဖူးတယ် ။ခုတော့ ပိုပြီး စုံစုံ လင်လင်တွေ့ ရလို့ ဝမ်းသာမိပါတယ်။
ဪရွာသူရွာသားတွေကိုး ချောပ ခန့်ပ ကြက်သရေ ရှိပ မုန့်ဟင်းခါးမစားရသော်လည်း အားပေးသွားပါကြောင်း အညစ်နဲ့တူ၏တိုတို ပုံတွေကလဲ ဂုဂုဂု
ရွာသူရွာသားတွေရဲ့ ပုံတွေကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ တစုတဝေးထဲတွေ.ရလို့ ကျေးဇူးပါနော်….
နောက်များအခွင့်အရေးပေးရင်တော့ အားလုံးနဲ့ တွေ့ကြရတာပေါ့နော်….
ကိုယ်တို်င်မပါပေမဲ့ အားလုံးပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေတာကို တွေ့ရတာနဲ့တင် ပျော်စရာကောင်းပါတယ်…
ဟား………….. ဂေဇက်ရွာသူ/ရွာသားတွေ အချောတွေချည်းပါလား။ အားလုံးကိုတွေ့ရလို့ ဝမ်းသာပါတယ်။
သူကြီးအလှုမလိုက်ချင်တာတော့ပြောမနေနဲ့။ ယပ်တောင်မှာရိုက်တဲ့ဒေါင်းရုပ်တောင် ပါမလားဘူး။
ပုံ(၁၀) အပျော်လွန်နေတာနဲ့ နေ့လည်စာလွတ်သွားခဲ့တဲ့ရွာသားလေး …ဘယ်သူလဲ။
ပုံ(၂၀) ပါးပြင်မှာ သနပ်ခါးလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းသူလေး… ဘယ်သူပါလဲ။
ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ ့စရာပုံများအတွက်ကျေးဇူးပါကွယ်။ ဒီနေ့မှ မြင်ရတာ။ မနေ့က ဘာပုံမှ
(၁၀) ရွာသားကတော့ ကိုသူရဇော်ပါ ။
(၂၀) ရွာသူလေးကတော့ မဂျူးဂျူးမပါ ။
နှစ်ယောက်စလုံး လက်ရှိ ရွာထဲမှာ active ဖြစ်နေပါတယ် ။
၄၂ အပီထိုး ပေါက်ရောပေါ့..
ကွန်မင့်တွေ စုံလောက်ပြီထင်လို့ နောက်ဆုံးမှတ်ချက်လေး ဝင်ပေးပါ့မယ်…။
စိတ်ကူးထဲမှန်းဆထားတာနဲ့ အတူဆုံးပုံက မဝေဝေ ပုံပါ
စိတ်ကူးထဲမှန်းဆထားတာနဲ့ မတူဆုံးပုံက ရွာစားကျော် ပုံပါ
နာမည်နဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံးပုံက (ကို)အညာတမာ ပါ
နာမည်နဲ့ မလိုက်ဖက်ဆုံးက ချာတူးလန် ပါ
မင်္ဂလာအရှိဆုံးပုံကတော့ ဆူးတို့ စုံတွဲပုံပါ။
(ဒီလောက်လိုက်ဖက်အောင် ဘယ်လိုအပြန်အလှန်ရွေးချယ်ထားပါလိမ့်.. )
စာဖတ်သူတွေ ကံကောင်းထောက်မစွာ မတွေ့လိုက်ရတဲ့ပုံကတော့
အလှူမလိုက်ရလို့ စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ မှုန်တေတေအောက်သိုးသိုးဖြစ်နေတဲ့ အဘိုးကြီးတယောက်ပုံပါပဲ…။
မဆုံဘူးတဲ့ရွာသားတွေကို ဓါတ်ပုံလေးမြင်ခွင့်ရလို့ ပိုစ့်တင်သူ အိတုန်ကို ကျေးဇူးပါ….လို့…..။
ဘီယာ ဗိုက် ပူပူကြီး စူထွက်နေတဲ့ပုံ မှန်းထားတယ်နဲ့တူတယ်..
ဦးဦးပါ ရေ.. ဆူး တို့ အပြန်အလှန် တွေ့ရှိခဲ့တာ ရနှစ်ကျော်ပါပြီ။
ချစ်သူသက်တမ်း ရနှစ်ကျော်ပြီ ဆိုတော့ ပွဲထုတ်ဖို့ အချိန်တန်ပြီမို့ အလှူကို ခေါ်ခဲ့တာပါ။
မင်္ဂလာ ရှိတယ် ပြောလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အားလုံး အချောအလှတွေချည်းဘဲ…ဒီတခေါက်မဆုံရလဲ နောက်တခေါက်တော့ကြူံကြိုက်ရင် အပီဝင်နွဲရတာပေါ့…
တင်မယ်ဆိုလဲ တုံလေးရယ် ပြောရောပေါ့ (လှလှလေး ပဲထုတ်ရအောင်)
အခုတော့ အီးဟီး… မလှမပကြီး
အူးလေးတို ့ရွာစားတွေကြည့်ရတာ ရေလည်တဘောကောင်းမဲ့ပုံပဲဗျာ..
ဒေါ်အီတုံးရဲ့ ရုတ်တရက်ဒုက်ချက်များ အဲလေ မှားလို့ အမှတ်တရရိုက်ချက်များ
etone ရေ ဘယ်တုန်က ဘယ်ကိုသွားကြတာလဲဟင်။ သိတာနောက်ကျသွားတယ်ဗျာ။
အား လုံး ကို တွေ့ ရ တာ အ ထူး ဘဲ ဝမ်း သာ ပါ သည် ။
ဥးရေးက ပေါ်ခံနီးမှ တုံးတာကိုဗျ ..
တော်ပြီ ကျနော်ဆီမှာလဲ တစ်ယောက်ချင်းပုံတွေရှိတာ တင်တော့မယ် အားကျမခံ
ဟယ်တော့.. လေးပေါက်ရေ … တဂယ်လား ဟင် .. …
မနိုကင်မရာထဲက ပုံတချို့ ပျက်ကုန်လို့
ချဉ်ပါတယ်အေ … ဒါ့ပုံတွေကို ဖျက်လိုက်ပါပြီ … ။
နောက်တစ်ခါ လူသိမခံရဲတဲ့ လူတွေ လူလုံးထွက်မပြနဲ့လို ့ပဲ ပြောလိုက်ချင်ပါတော့တယ် ။
အမှန်က တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ရမှ တင်သင့်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံရိုက်တာကို တချို့က မသိလိုက်ဘူး။
တချို့ကလည်း ဒီလိုတင်ဖို့ဆိုတာကို မသိဘူး။
Group ပုံတင်တယ်ဆိုတာက ကိစ္စမရှိဘူး။
တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ပုံတွေတင်တာကျတော့ မကောင်းဘူး။
နောက်တစ်ခါ လူသိမခံရဲတဲ့ လူတွေ လူလုံးထွက်မပြနဲ့လို ့ပဲ ပြောလိုက်ချင်ပါတော့တယ် ။ )
အလှူကို အတူတူ စုသွားကြတာနဲ့ ဆိုဒ်မှာ တင်တာနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ဘူးလေ။
နောက်ဆိုရင် သတိလေးတချက် ထားစေချင်တာပါပဲ။
အန်တီမမရေ ….. သဂျီး ဖျက်ခိုင်းတဲ့ လူငါးယောက်မှာတောင် … အန်ကယ်တစ်ယောက်ကလွဲလျှင် ကျန်တဲ့လူတွေကို .. ဆိုဒ်ထဲမှာ ပြန်တင်မှာနော်လို့ …. ပြောပြီးမှ ရိုက်ခဲ့တာပါ ။ မကြားမိလိုက်တာလား … မမှတ်မိတော့တာလားတော့ … မသိတော့ပါဘူး ။
ကိုယ့်ပုံကို မပါစေချင်လျှင် … ပို့စ်တင်သူကို မေးလ်ကနေ … လှမ်းပြီးပြောလို့ရပါတယ် … ။ဖျက်ခိုင်းလို့ရပါတယ် ။ အကြောင်းကြားခဲ့လျှင် အကြည်တသာပဲ ဖျက်ပေးမှာပါ ။
အခုလို တင်ပြီးလို့ ငါးရက်လောက်ကြမှ …သဂျီးကို တိုက်ရိုက်ကွန်ပလိန်းတက်တာ … သဂျီးကနေတဆင့် ဖျက်ခိုင်းတာကတော့ ဘိုင်ဖို့စ်နဲ့ ဖျက်ခိုင်းသလိုပဲ ဖီးလ်းနည်းနည်းငုတ်တယ် … ။ သဂျီးဖျက်လိုက်တဲ့ ငါးပုံထဲမှာတောင် … ကျေကျေနပ်နပ်တင်ခွင့်ပေးထားသူရဲ့ ပုံတောင် ပါသွားသေးတယ် … ။
အလှူကို အတူစုသွားလုပ်တာ .. ဆိုဒ်မှာ (ပုံ)တင်တာနဲ့ မဆိုင်ဘူးဆိုပေမယ့် … ဆိုဒ်ပေါ်တင်ပြီးကြေငြာခဲ့ကြတာ .. သတင်းတွေ ဖလှယ်ခဲ့တာ…. ဆိုဒ်ကနေတဆင့် အလှူခံခဲ့ကြတာမျိုးလေ ။ ဆိုဒ်ပေါ်ကနေ ပုံတွေတင်တာ .. .ဖွချင်တာထက် ၊ ကိုုယ့်ပုံတွေပြပြီး လူသိရှင်ကြား ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်နေခြင်း တစ်မျိုးလို့ ယူဆမိလို့ပါပဲ ။
ပထမအကြိမ်အလှူလုပ်တုန်းကလည်း ကျွန်မတို့ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်မရပဲ … တင်ခဲ့သူတွေရှိပါတယ် .. ဒါပေမယ့် လူမုန်းများတဲ့ ကျွန်မပုံတွေ ပါ့ဘလစ်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် … နောက်ပိုင်း လှုပ်ရှားမှုတွေအတွက် … ယုံကြည်မှုတွေ ၊ စိတ်အားထက်သန်မှုတွေ ၊ ပူးပေါင်းပါဝင်လိုစိတ်တွေ ပိုပါစေတော့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ ့ဒီအတိုင်းလေး မျောသွားခဲ့တယ် ။ ဒီတစ်ခါလည်း … ဒီလိုစိတ်နဲ့ပဲ တင်လိုက်မိပါတယ် ။ တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက် …တစ်စုံတစ်ရာ နစ်နာတာမျိုး ၊ စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်ခဲ့တာမျိုးရှိလျှင် အနူးအညွတ်တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်နော် ။
ဒီပို့စ်ကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခဲ့ရပေမယ့် ဘာမှမပြောခဲ့ပါဘူး … အများကလဲ ဘာမှမပြောကြတော့ ကြိတ်ပြီးပဲ ဆုတောင်းနေရတယ် … (ရုံးကလူကြီးတွေ မမြင်မိပါစေနဲ့လို့ … )
အမအနေနဲ့ကတော့ ရွာထဲမှာကျင်လည်နေတဲ့ဘဝနဲ့ အပြင်ကဘဝ မတူဘူး … တူလဲမတူချင်ဘူး … အဲဒါကြောင့်လဲ သူငယ်ချင်းအရင်းအခြာတွေကိုတောင် ပြောမထားပါဘူး … ရွာထဲကလူတွေကို အပြင်မှာ ပျော်ပျော်ပါးပါးတွေ့ပါတယ် … အဲဒါက သီးသန့်ပဲလေ … တကမ္ဘာလုံးကိုတော့ မသိစေချင်ပါဘူး … နောက်ပိုင်း စိတ်ထဲရှိတာကိုရေးဖို့တောင်မှ လက်တွန့်သွားမိပါတော့တယ် ….
လူတစ်ယောက်ချင်းစီမှာ လူသိမခံရဲတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိတတ်တာကို နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ် ….
ဟုတ်ကဲ့ပါမဝေရေ …. ။ စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်စေတဲ့အတွက်ဆောရီးပါနော် ။
ကျွန်မရဲ့တွေးခေါ်မှု အသိဉာဏ်အားနည်းလို့ … ထောင့်စေ့အောင် ဖြည့်တွေးဖို့ လိုသွားတယ် … ။ သင်္ခန်းစာလည်း ရပါပြီ … ။ နောက်ဆို …ကလောင်များရဲ့ နောက်ကွယ်က ပုံရိပ်တွေ ထပ်ထွက်လာမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး ။
ကျနော့် အလွဲပို့စ်တွေမှာ တချို့ရွာသားတွေကို မျက်နှာပြူးပြူးကြီးတွေနဲ့ …. သူတောင်းစားနဲ့ နှိုင်းပီးတော့ကို နောက်ထားသေးတာ..ပါသေးတယ်။
အားနားစရာတွေတော့ ဖြစ်ကုန်ဘီ… သူတို့ကို ပြန်မေးရအုံးမယ်..
ဒီပို့မှာ ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာမသိလို့ ဟိုဘက်မှာ နာမည်တွေရေးခိုင်းလိုက်တာမှားသွားပြီနဲ့တူတယ်။
“… နောက်ပိုင်း စိတ်ထဲရှိတာကိုရေးဖို့တောင်မှ လက်တွန့်သွားမိပါတော့တယ် ….
လူတစ်ယောက်ချင်းစီမှာ လူသိမခံရဲတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိတတ်တာကို နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ် ”
တခုတော့ရှိတယ် နာမည်ထိုးမထားလည်း ဂရုပုံထဲမှာ ကိုယ့်ပုံကိုသိသူတစ်ယောက်ယောက်ကမြင်သွားနိုင်တာပဲ။
edit လုပ်ခွင့်မရှိသေးသူတွေအပေါ်ကိုတော့ စိတ်ပြန်မပြောင်း လိုက်ပါနဲ့နော်..
ပြပြီးသား ဒီရုပ်ကြီးတွေ ကြောင့် တောင်းချင်တာတော့ မဟုတ်ပေမဲ့
သဂျီးက ပြောဆိုထားပြီးသား ဆိုတော့ မမေ့နိုင်ဖြစ်နေလို့ပါ ဗျာ..
ဆိုတော့ ..အက်ဒစ် လုပ်ခွင့် လေးတော့ ပေးသင့် ပါပြီ လို့ ..ရှက်ရှက် နဲ့ပဲထပ် တောင်းပါတယ်ဗျာ.. :redface:
ဒီတခါမှ မရ ရင်လည်းနေပါစေတော့ ဗျာ..
ကိုအမတ်ကြီးက ရွာတွင်းကော ရွာပြင်မှာပါ အက်တစ်ဗ် ဖြစ်ပြီး ရွာအကျိုးဆောင်ပေး နေတဲ့ ရွာစားပါဗျို ့
တောင်းဆိုနေတာလဲ ကြာပါပြီ..သဂျီးက မေ့နေလို ့…အဲတာ..
အချိန်အားလျင်ဖြင့် Edit လုပ်ခွင့်လေး ပေးဖို ့မမေ့ပါနဲ ့ဗျို ့
(ကျေးဇူးတင် ဝင်ခံကြည့်တာ )
ကိုပေါက်ဖေါ်ရေ..မေ့နေတဲ့ သဂျီးကို ဝိုင်းအော်ပေးလို့ ကျေးကျေး..
သဂျီး ရာထူးလွှဲပြောင်းပွဲကျရင်လည်း အပြန်အလှန်ထောက်ပံ့ပေးပါ့မယ်..
အင်းးး ဒီကြားထဲ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကို မထိပါးလာခဲ့ရင်ပေါ့ လေ..
အခှ ချက်ချင်းကို အက်ဒစ် လုပ်ခွင့် ရလိုက်တဲ့ အတွက် သဂျီးကိုကျေးဇူးတင်ရင်လည်း သူကတမျိုးဆိုပြန်အုန်းမယ်..
ဒီတော့ကာ အက်ဒစ်လုပ်ခွင့် အတွက် ဝမ်းမြောက်ရပါတယ် သဂျီးရေ့…
ကျုုပ်ကပြောထားလို့.. ပြောထားတဲ့အတိုင်း. Edit လုပ်နိုင်ခွင့် တောင်းတာ.. ဘာကိုရှက်ရတာလည်းဟင်င်င်..
ရွာသူားတယောက်က.. ကိုယ့်ပုံကို.. တင်ခွင့်ပေး/မပေးက.. ဆိုင်ရာရွာသူားရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်(Rights) ဖြစ်ပါတယ်နော..
ဆိုင်ရာသူတွေရဲ့.. အခွင့်အရေးကိုနားလည်ပြီး.. ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်ပေးတာက.. မော်ဒရိတ်တာ စိတ်ဓါတ်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်..
ဒီလိုနဲ့..ရွာသူားတွေကို.. ရာထူးတွေတဆင့်တဆင့်တိုးပေးသွားဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်..
တနေ့နေ့.. .. သူကြီးရာထူးလည်း တယောက်ယောက်.. လွှဲပေးဖို့ဖြစ်ရမှာပါ..။
သများလည်း ရှက်ရှက်နဲ့ ထပ်တောင်းပါတယ် …
သများကိုလည်း ရာထူး တိုးပေးဦး …
ကျုပ်တို့ကတော့ အရေထူနေပြီဗျာ… ပြသနာမရှိပါဘူး…ရွာသူရွာသားအချင်းချင်းပဲ…
ပျော်ကြတာ… ရွှင်ကြတာ… ညီအစ်ကိုအရင်းလိုခင်လို့ပြောတယ်ဆိုတာကို နားလည်ပါတယ်…
သဂျီးရဲ့ ဂေဇက်ရွာအတွေ့အကြုံတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပြီး ရွာရဲ့စည်းကမ်းလေးကို
ယခုထက်ပိုပြီး တိတိကျကျထုတ်ပြန်ရင်း၊ အရေးယူသင့်သူကို ပြတ်ပြတ်သားသားအရေးယူခြင်းအားဖြင့်
ရွာကို ဒီထက်ပိုစည်းလုံးအောင်၊ ပိုပြီးသာယာစည်ပင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာ…
ဒီပို့စ် ကိုဖတ်ရင်ငိုချင်တယ် မလိုက်ရလို့နော်…
စနိုးရေ … ဒီနေ့မနက် မေးလ်ဖွင့်လိုက်တော့ … ကော့မန့်တွေ ဝင်နေတာ .. ထူးထူးဆန်းဆန်း စနိုးဆီက .. အတော်များနေတယ် …. ။ စနိုးဆီကချည်းပဲ ပို့စ်19ခုမှာ … ကော့မန့် 1 ခုစီဝင်လာလို့ … တအံ့တဩဖြစ်မိပါတယ် …
ငါတို့ရတော့ ပျော်လိုက်ရတာ အရမ်း အရမ်း အရမ်းပါဘဲံ စနိုးလေးရယ်
ဓါတ်ပုံလေးတွေ ကြည့်ပြီး စိတ်ထဲ ပီတိဖြစ်မိနေရတာ….
ခုတော့ ဒါ့ပုံလေးတွေ အတောင်ပေါက်ပြီး ပြေးကုန်ကြရှာပြီ…..။